Kurume 2018 - Network maRadio
musha / 2018 / Kurume
Mwedzi: March 2018
Inrico T320 ongororo naHamradio Concepts
Tarisa ongororo yakazara yevhidhiyo paInrico T320 yakaitwa naHamradio Concetps.
Semazuva ese, Eric anoita inoshamisa-yakadzika kuongorora kweT320 uye kuti ingashandiswa sei mumhando dzakasiyana siyana dzedigital.
Tarisa vhidhiyo pano.
TM7 WiFi uye GSM yekunze kanyanga mod
Kune avo vane matambudziko ewifi pane iyo TM7; iri bhuku remafoto rakagadzirwa neshamwari yangu yakanaka. Ini ndichaedza kududzira te mavara pane iwo mapikicha zvakanaka sezvinobvira. Icho chikonzero chechiratidzo chakaipa chiri nyore: mukati meiyo kanyanga haisati yakabatana.
1 - Bvisa tepi nemapurasitiki. Mushure maizvozvo uchaona iro rese mamaboard.
2 - Plastiki uye tepi inoda kubviswa.
3 - Chenjera paunenge uchibvisa tepi. Iyo yekubatanidza inogona kukuvara zviri nyore.
4 - Motherboard yakagadzirira tweak.
5 - GSM, Wifi uye GPS (yakabatana nekunze)
6 - Kupera kweiyo antenna uye chinongedzo.
7 - Unogona kunyatsoona chinongedzo chatichabatana neiyo GSM kana wifi chinongedzo pabhodhi.
8 - Iyo TM7 inoita kunge iine yemukati GSM kanyanga. Kubatana kwekunze hakuna kubatana neGMM.
9 - Iyo TM7 inoita kunge iine yemukati wifi antenna. De chinongedzo chekunze chiri pachena hachina kuitirwa wifi.
10 - Une mikana miviri ikozvino:
1- Kunze kweGMM
2-Kunze kune wifi
Zvichienderana nekuti unozoshandisa sei chishandiso iwe uchafanirwa kusarudza pane zvekubatanidza.
11 - Mune ino kesi isu takasarudza kubatanidza wifi. Unogona kushandura izvi zviri nyore gare gare.
Credits: Uyu mushumo wemufananidzo wakagadzirwa naMarcel Goedemans uye wakashandurwa naFilip Everaert
Wedzera Bhatiri remukati uye GPS kuInrico TM-7 na OK8NWO
Yemukati Bhatiri Kuchinja
Vanhu vazhinji vari kugunun'una kusanganisira ini, kuti mumota dzamazuvano 12V inopa inoderedza kuendesa kuTM7 kana kuvesa kwadzimwa. Ini ndinopomera kuburitsa uye kurongeka kwezvematongerwo enyika. Zvishoma senge auto stop bhatani bhatani reinjini.
Ini ndaneta neiyi bhatiri nyaya, nekuti TM7 inononoka kubhoot uye mukusarongeka haisi iyo inokurumidza Android yandinofanira kurarama nayo.
Shamwari yakaratidza kuti 18650 Maseru aikodzera kutariswa, ini ndakanga ndisina kuona kuti anoshandiswa kwese kwese incl vaping zvishandiso uye laptop bhatiri mapakeji. Sezvo ini ndisina ruzivo neLithIon mabhatiri ndaive nekumwe kutya kuti izvi zvaizoenda zvakashata zvisizvo.
Ini ndakaraira 3400mA Sanyo maseru ane simbi solder ma tag, kuita kuti hupenyu hureruke pane iyo kuvaka.
Ndakaona zvakare LithIon mabhatiri anoda chaiyo charger redunhu. Ndatadzira iyo inozivikanwa saiti saiti ini ndawana iwe unogona kuwana 2,3,4,5,6 masero machaja. Ndakafunga maseru mana angangodaro ari kupfuura zvandaida asi ini ndaive nekamuri mukati meTM4, saka mana maseru yaive. Zvakare, ini ndakawana 7V switchable 4A magetsi anokwanisa kuita kuchaja.
Id yakatovhura iyo TM7 kuisa iyo sd kadhi, saka ndakaziva chinhu chekutanga kuita kubvisa iwo maviri masimbi ari pabhodhi. Izvi zvinogadzira yakakwana nzvimbo ye2x 2 maseru kune ese mativi.
Kuzvimisikidza maererano nedhayagiramu yakapihwa nebhodhi (zvinogona kuve chero, pane zvakawandisa kudoma) uye kuve nechokwadi chekuti zvese zvaive mugwara maererano ne polarity, uye zvakare insulated. Ini ndakaisa imwe furo kumashure kwekesi kune ese mativi kumisa mabhatiri achitenderera achitenderera. Izvo zvakare zvinovachengetedza vakachengeteka. Iyo DC inoburitsa kubva kubhodhi ini ndakatengesa paralell kune underisde yepcb pamwe nekuwedzera uye kubvisa kuenda kumatunhu akateerana.
Nekudaro, ini ndinofanira kuratidza kuti fiyuzi inofanira kukosheswa uye kunyange imwe yaunogona kukwirisa kumusana kupinza mukati ie mubati, kana zvirinani inline fuse kana paine chimwe chinhu chiri kupfupika kana chero chii zvacho. Ini handina sezvo ndakanga ndisina chinhu padhesiki rekutambidza. Shanduko yekuchinja inogona zvakare kubatsira kana iwe uchikwanisa kupaza iyo android uye iwe unofanirwa kuzadza zvizere pasi yeyuniti. Iwe haudi kunyatso kuvhura uye kudzora waya mushure meiri basa zvakare.
Ndinoibhadharisa kwemaawa masere uye ndinopedzisira ndave nemaawa makumi maviri nemana ekushandisa zvizere. Chinangwa changu chaive 8hrs mumota, asi yakapfuura nzira kupfuura zvandaida maererano nekwanisi. Kufungidzira kwangu kurongeka kwemasero matatu kungangoshanda. Ingo tora iyo chaiyo charger pcb.
Parizvino, iyo TM7 inokwevera 130mA mukumira uye yakakwira nezve 240mA, ichi chidiki mune chaiwo mazwi sekungori runhare mubhokisi hombe. Nekudaro, 18650 maseru akakunda zvishoma asi zvinoshanda.
GPS Yemukati Kanyanga Modification
Nekuda kwekushaya kwangu kwekushivirira maererano netambo mumotokari ndakafunga kuisa module yeGPS muTM7.
Saka ndisati ndafunga kubvarura gps antenna ndikatarisa mashandiro ayo mukati meimba. Hazvishamise kuti zvaive zvakanaka, saka ndiyo yaive yangu yekutanga. Iyo gps antenna ipurasitiki yakavharwa saka banga rakapinza uye pendi zvakashandiswa kuvhura kesi. Yayo yakapinza uye yakapwanyika saka tarisira matomu epurasitiki kubhururuka akatenderedza musangano.
Ndave kuibvisa, ndakabvumira 3 kana 4 inches of coax cable uye ndokucheka. Ini handidi iwo akawedzera kureba zvakadaro.
Shandisa simbi yakanaka kwazvo yesimbi yekukwirisa pamusoro, chikonzero hachisi coax, asi socket iri paTM7 inonetsa kusvika uye pane Chibvumirano chidiki kwazvo chekubaya pini yepakati yekubatanidza. Iko kuruka kuri nyore kuitengesa kwairi. Sezvo isu tisina imwe sarudzo nekuda kwekusaita mutete coax unouya kubva kuPCB, ini ndaisazoyedza kuicheka yakavhurika woenda nenzira iyoyo. Bvisa socket woisa muvhisi kana chinamato kuti ubate sezvo iyo soldering isinganetsi., Ndakaiwana yakabatana zvakadaro uye ndakaisa iyo antenna snug kuruboshwe kurudyi kwemukati kumashure kesi pamusoro pebhatiri randakanga ndatosunga.
Kudonhedzwa kwechiratidzo mukati memotokari kunoregeredzwa uye ndakachiisa pasi pakati pegear bhokisi nechigaro. Pa dash chiratidzo chazara.
Ita panjodzi yako wega. Ini handigamuchire chero mutoro kana chimwe chinhu chikakanganisika kana chiri pamoto nezvimwe.Ndingafunga kuti aya ma mods anogona kuvandudzwa neimwe nzira maererano nekuchengetedza uye njodzi yakajairika. Izvi zvakaitwa seyakabviswa bvunzo, ini ndaizoda kuti mugadziri anyatsoita izvi sesarudzo pakutenga. Kuva nekuita izvi kwaive kunze kwekudikanwa uye kushungurudzika.
Chokwadi cheAmateur Radio muna 2018
Ndeupi mutambo mukuru wepanyika? Zvino pane mubvunzo!
Kune vazhinji venyu muchiverenga chinyorwa ichi, mhinduro ichave yakajeka - Amateur Radio. Icho chivaraidzo chinofadza, chinonakidza uye, pane dzimwe nguva, chinogumbura mune zvimwe zvakaenzana zviyero!
Asi zvakare chiitiko chekuzvivaraidza icho chakambosundira miganho yehunyanzvi - uye kazhinji yaibvunza mibvunzo hapana-munhu akambofunga kubvunza.
Ini ndinoda chokwadi chekuti nhoroondo yemafaro edu yakazara nevatungamiriri vekutonga venguva yavo vachitibvumidza kupinda kumabhendi anoonekwa se "asingabatsiri" uyezve tichitarisa sezvatakaratidza nekufamba kwenguva kukosha kukuru kwavangave nako - hongu, kunyangwe vanofungidzirwa " mutsara-wekuona-mabhendi.
Zviri kusetsa nhasi kuti chinonyanya kudiwa pasi rese kutengeserana iVHF / UHF neMicrowave, iwo ma "line-of-kuona" mabhendi akawanikwa mu20th Century.
Muno muUK, swathes hombe dzeiyi spectrum iri kuramba ichingobatwazve uye zvobva zva “tengeswa” kune vakakwikwidza vepamusoro-soro (chimwe chinhu chagara chichindirova ini sekushoreka, asi ndiyo imwe nyaya…)
Ichokwadi ichocho kunyangwe pamwe vazhinji veHams pane zuva nezuva zuva mu2018 haina kunyanyisa.
Ini ndakachinja pa160m rimwe zuva uye ndakatarisana neS9 yeruzha kuyambuka bhendi. Yakanga iri S5 chete makore mashoma apfuura. Ndine rombo rakanaka - vanhu vazhinji vari kuwana S9 + 20dB kana ruzha rwakawanda, pamabhendi akati wandei…
SaHams, tinosangana nematambudziko mazuva ese kubva kunzvimbo dzekukanganisa; magetsi-mutsetse adapteri, asingateedzere zvishandiso zvinotumirwa kubva kunze kwenyika, hissy routers, zvine ruzha midziyo yemagetsi, magetsi emagetsi uye neimwe nzira yese yemagetsi hashi. Zvinoita kunge zviri kuwedzera nani…
Ipapo tichava neMasangano eVaridzi veKumba pamwe chete nezvibvumirano zvitsva zvinorambidza zvinotimisa kuisa antenna, ingave iri tambo yemamita makumi masere kana shongwe refu yakareba makumi matanhatu. Isu tine vavakidzani vanogunun'una nezve maziso uye nezve kupindira kubva ku "iyo Radio Ham" kumusoro kwemugwagwa.
We ungafunga kuti manda yeantena chinhu cherunako, asi isu tinofanirwa kubvuma kuti vazhinji vavakidzani vedu havazobvumirane - dzimwe nguva, zvinonyadzisa, zvinotungamirwa needu maXYL!
Kune vazhinji, inotakurika mashandiro inopa kumwe kupukunyuka kubva pane izvi, asi havazi vese vane kurudziro yekukwira gomo neQRP giya uye kutamba SOTA, inorumbidzwa zvikuru kunyange iriyo.
Kana iyo chete Ham Radio yatinogona kutamba nayo yakaganhurirwa kune inonzwisisika mamiriro ekunze uye rwendo rwekunze, vazhinji vedu hatisi kuzotamba nhepfenyuro yakawanda mazuva mazhinji egore, isu tiri?
Zvirinani nharembozha inoshanda pano uye yakachengetedza zuva revazhinji vedu pane dzimwe nguva.
Ipapo isu tinonetsekana nenyaya yekuti isu tinoonekwa, nenzira kwayo kana zvisirizvo, sevanhu vechinyakare, vasina kugadzikana uye vasiri-ve-kubata.
Paunotarisa izvo Hams zvaakapa kune nhoroondo yeKutaurirana, uku ndiko kukwirira kwekusanzwisisika.
Ivo vanhu chaivo avo, mukuita, vakawana nekuvandudza kutaurirana kwemazuva ano, uko munhu wese kubva kuvana vechikoro kusvika kuhurumende anovimba navo, vava kutukwa sevanhu vechinyakare sa 78rpm shellac discs!
Tinofanira kungorega ipapo here?
Saka chii chakanakira kuenderera mune hobby? Vazhinji vakafunga kuti havazodaro!
Idzo nhamba dzinosiya hobho, anecdotally zvirinani, zvinoita kunge dziri kuwedzera. Ini ndinowanzoona kushambadzira pamhepo panotengeswa zviteshi zvakakwana, uye panoburitswa nemuridzi chinhu chakadai "kurega mushure memakore makumi matatu nemashanu - ruzha rwakanyanya - kunetseka zvakanyanya…"
Iye zvino unogona kuve nerombo rakanaka rekugara kune imwe nzvimbo yakanyarara magetsi - kana iwe ungakwanise kutenga purazi hombe kana purazi kumaruwa uko kune ruzha kana musina ruzha rwemagetsi - asi ruzhinji rwedu hatisi kuzokwanisa ita izvozvo.
Imwe nzira yekubuda nayo?
Pane here pfungwa yekuti "Kana isu tisingakwanise kuvakunda, batana navo"?
Imwe mhinduro yekutora Ham Radio uye kuendesa kunzvimbo iyoyo yatinombozvidza pachivande asi panguva imwe chete tichinamata? Iyo online nhandare?
Ndinoona zvisinganzwisisike kuti, sehams, isu tiri kupfuura kufara kukumbundira internet nemakomputa pazvinotikodzera - semuenzaniso, maCW-ers anoshandisa zvakanyanya Reverse Beacon Network, vanofarira Datamode vanogamuchira zvirongwa zvakaita sePSK Reporter - DX -ers vanovimba nekisumbu ravo ravanoda, zvichingodaro.
Isu tese pamwe tine yedu yatinofarira yekucheka matanda, mapurogiramu edu eanokwikwidza uye mawebhusaiti atinogara tichiita, kunyangwe zvikave zvekungochema!
Asi isu tiri vashoma here wo kutya "kuenda kune iyo hogi yese" uye kubvuma iyo Internet kune zvazviri chaizvo zvazviri? Imwe nzira inogadzirwa nemunhu yekuparadzira? Ichi ndicho chikonzero here nei iyo yose "Network Radios 'chiitiko chiri chakaoma kunzwisisa?
Mumwe anonyatso kuzivikanwa UK ham (uye munyori wenguva dzose weimwe yemagazini edu eAmateur pano) akandinyorera nekutendeseka kunorumbidzwa munguva pfupi yapfuura. Akatsanangura kuti ainetseka mukufunga kwake nezveInternet iri fomu yekuparadzira, kunyangwe nehungwaru anogona kuona kuti zviri pachena!
Akanga ari, mukutaura, achiedza kuuya (sezvandakangoita pakutanga) pamwe kunyange kunzwisisa kuti paigona kuve neimwe nzira yekupararira kwemasaini edu, akaitwa nevanhu ipapo.
Akazoenderera mberi kubvuma kuti iyo zvechokwadi nyaya kwaari, yakanga isiri iyo yekuti iyi nzira yekuparadzira yaivapo, asi kuti "yaigara iripo". (Kutaura chokwadi, izvo zvinoita kuti zvive zvakasiyana!)
Rinofanira kunge riri basa rakaoma here?
Asi izvi zvakaita kuti ndifungewo!
Takazojairira here Ham Radio kunge "basa rakaoma" zvekuti kana tekinoroji ichigadzira nzira yekuparadzira inoita kuti hupenyu hwedu hureruke, isu tinenge vane kune pooh-pooh iyo?
Pane here pane imwe nyaya yemafungiro? Unoziva mhando yechinhu… “Ini ndaifanirwa kushanda nesimba kuti ndishande VP8G, saka ndodii iwe kukwanisa kuzviita nyore nyore? ”
Muna 2018, hunyanzvi hunowanikwa kuna Hams hwakatipa nhandare nyowani (internet kuparadzira) - yakafanana neayo, asi akatosiyana neiyo nzvimbo yekutamba yekare (ionospheric & tropospheric propagation - iyo nenzira, ichiripo kwatiri zvakare - haina kuenda, tinogona uye fanira ndichiri kuishandisa!)
Ndiani anoti hatigone kutamba munzvimbo mbiri dzekutamba kamwechete? Chokwadi inyaya yenzira mbiri dzekuparadzira dzinogona kushandiswa, kana zvirizvo zvinoita kuti ufare?
Pane chimwe chinhu chiri muhunhu hwevanhu chisingade kuti vamwe vave nacho zviri nyore kupfuura zvataive nazvo, asi ini ndaizoda kuona maAmateurs achivhurika kuti vagamuchire matekinoroji matsva mune hobby uye nekuziva kuti 21st Century Amateurs 'zvido zviri, kunaka kwenguva yatiri kurarama mairi, zvakangofanana siyana kubva kune avo ve20th Century Amateurs.
Hapana chakakanganisika neizvozvo - ndizvo chaizvo zvazviri!
Kune vamwe vedu, zvinonetsa kuti misoro yedu itenderedze matekinoroji matsva, nekuda kwekushanda nesimba kwataifanira kuisa kuti tiwane marezinesi. Izvi izvozvi zvinogona kunzwisiswa sechishoma zvishoma, kana tangowana misoro yedu kutenderedza "Internet senzira yekuparadzira" nharo. Mushure meInternet yese yakavhurika kune wese munhu…
Isu tese tine maitiro ekuzvidzivirira - izvi zvimwe nekuti we kuva nechimwe chinhu vamwe vanhu vasina - rezinesi raHamu.
Asi zvakare, kuisa izvi mumaonero, uye kuwedzera zvakapusa, kuva neizvi zvinoreva kuti isu tinongova neruzivo rwehunyanzvi nezve (kunyanya) kuvaka uye kuyedza vatenderi (uye pamwe ruzivo rweCW)
Izvi ndizvo zvakakosha zvakanyanya kune yakawanda hams mazuva ano?
Ini ndinoda izvo RSGB Mutungamiri, Nick Henwood G3RWF, akacherekedza paSosaiti yake National Convention muna Gumiguru apfuura, kuti 20th Century Hams vangangodaro vaifarira mhinduro dzemagetsi & dzemagetsi kugadzirisa matambudziko, nepo 21st Century Hams vane mukana wakanyanya wekutsvaga mhinduro kumatambudziko mu software.
Iyo inzira inonakidza yekutarisa shanduko mune yekuvaraidza mumakore makumi matatu apfuura kana zvakadaro…
Izvi zvese zvinotungamira kupi?
Ndiani anoziva? Icho hachisi icho chinhu chinonyanya kufadza here?
SDR tekinoroji iri kushandura HF, tekinoroji yemakomputa iri kushandura iwo anodikanwa eCW, Datamode & DX-ing, (chingotarisa kusimuka kweFT8!) Uye tekinoroji yemazuva ano yekutaurirana uye zvivakwa zvayo zvinowirirana zviri kutipa shanduko yekupedzisira - imwe nzira yekuparadzira.
Saka nakidzwa neRF - mune ese mafomu!
Saka hongu, enda kumberi uye utambe neaya maNethiwekhi maRadio anoshandisa iyo Internet - ita Ham-shamwari kutenderera pasirese.
Kutaurirana neumwe neumwe, shandisa software, shandisa Boat Anchors, shandisa QRP CW, shandisa mavhavha evharuvhu, shandisa maanti makuru, shandisa maina mashoma, shandisa neti dzakabatana-internet, tora chikamu mumakwikwi, shanda nemasaiti, shandisa D-STAR - ita se zvakawanda sezvaunoda!
Nakidzwa neRF mune ese mafomu mazhinji - maHamu mabhendi, hongu, asi zvakare maseru mabhendi, iwo ma-fi mabhendi & mabhendi ebluetooth - kunyanya kana ichikupa kunakidzwa!
Mushure mezvose, ko hobby pakupedzisira haifanire kutiita kuti tifare?
Zvichida zvinosiririsa "Reality yeAmateur Radio muna 2018" ndeyekuti, kuteerera kune vamwe vanhu mune yekuvaraidza, iwe unogona kukanganwirwa nekufunga kuti ndicho chinangwa chikuru chaive kuita kuti Hams inetseke sezvinobvira!
Ngatishandisei zvose iyo inoshamisa matekinoroji anowanikwa kwatiri mu2018 uye kupfuura - mushure mezvose, gore rinouya panogona kunge paine mamwezve matoyi matsva munzvimbo yekutamba!
Ini, kune rimwe, handigoni kumirira!
Tsamba Nhatu KuMagazini
Nhasi raive zuva re "Porn Magazine"!
Usati wasvetukira kumhedziso mhedziso, iyi ndiyo tsananguro yemukadzi wangu yezuva mumwedzi wega wega apo Radio Society yeGreat Britain magazini yemwedzi nemwedzi 'RadCom' inorova doormat yedu.
Iye anoziva kuti ini ndichave ndichiongorora uye kutsvagisa pamusoro pezvinyorwa uye kushambadza, kutarisa kuti ndione izvo zvitsva munyika yeAmateur Radio.
Dai chete paive paine girazi rinoyevedza reiyo nyowani Icom 7610…… oo iripo, yay!
Nhasi, hazvo, hachisi chinhu chitsva chemidziyo yeredhiyo kana chinyorwa chinokurudzira chakandibata. Nhasi ndanyanyorohwa netambo yetsamba kumupepeti, mune inozivikanwa seye "Izwi rekupedzisira" ikholamu.
Pakave paine yakasarudzika seti yemafungiro akaratidzirwa nezve tekinoroji nyowani uye zvazvinoita pane zvatinofarira. Uye kana ndiri akatendeseka, ndinovimba handisini ndoga ndinenge ndine hanya nezvandiri kuverenga.
Mutori wenhau nhamba yekutanga airondedzera mashiripiti eamateur redhiyo uye kuti ibasa ripi ratakabatana saHams kusvika kune vamwe kuti vawedzere nhamba dzedu - zvese zvakanaka zvinhu.
Asi akazoenderera mberi achiti uye ini ndinotora mazwi "... zvirokwazvo vechidiki vanenge vaine maPods avo, iPads iPhones nezvimwe zvakadaro, asi hapana 'mashiripiti' nemidziyo iyoyo"
Ndine chokwadi chekuti munyori haasi kuyedza kumhanyisa chero munhu paanonyora izvi - zvinongotaridza kuoma kwazvakaita kwatiri isu vakuru hams kuona nyika kuburikidza nemaziso evanhu vadiki kutipfuura.
Asi ngative vakatendeka zvine hutsinye, zvirokwazvo izvi zvinomiririra a kura kusanzwisisa kuti vanhu vezana ramakumi maviri nemasere varipi
Edza kuudza 99% yevagari vemazuva ano kuti hapana "mashiripiti" mumafoni avo mafoni!
Chishandiso chiri chekubata-bata muhomwe yekombuta; chishandiso chine simba kudarika desktop PC kubva chete makore mashoma apfuura; mudziyo unobvumidza kutaurirana nekukurumidza pasirese neHD mhenyu vhidhiyo mukuwedzera kune odhiyo uye meseji yekutumira; mudziyo unokwanisa kuchengeta raibhurari yako yakazara yemumhanzi pairi…
Kunyanya? Iwo hausi mashiripiti? Zvinoita kunge zvemashiripiti kwandiri! Slab diki regirazi rinoita chero chinhu munzvimbo yekutaurirana yaunogona kufungidzira? Wow!
Rangarira Windows 3.1?
Yechokwadi cheki kwatiri isu chembere!
Vazhinji vari pasi pemakumi matatu havayeuke nguva pamberi pebhatani re "Kutanga" muWindows! (Ingorega izvo zvichinyura mukati!)
Vazhinji vari pasi pemakumi matatu havana zano rekuti "tuning knob" pane redhiyo ndeyei.
Vazhinji vari pasi pemakumi matatu havana zano rekuti Ham Radio chii chaizvo, inoita kana kunzwisisa mashandiro ayo (uye vanoratidza kufarira kushoma mukuda kuziva kana, kubva pane zvakaitika kwandiri!)
Nekudaro, vazhinji vari pasi pemakumi matatu vane yavo imwechete smartphone, piritsi kana komputa uye pamwe vanoziva kuti vanoita sei imwe nhanho yekukodha pairi zvakare.
Izvi zvinoratidza kuyerwa kwebasa ratiri kupokana naro mukuita kuti vanhu vatsva vafarire mune zvatinofarira. Zvinosuruvarisa, isu tinoonekwa, kana isu tichionekwa zvachose, sevanhu vechinyakare, vasiri vechinyakare uye vasiri-ve-kubata.
Asi idzi handidzo chete dzakataurwa dzakandirova mune isingasviki nzira inonakidza.
Mumwe munyori wechipiri akataura izvozvo “… Amateur redhiyo kutaurirana anonongedzera kunongedzera pasina hukuru hukuru pakati, kunze kwekudikanwa Amai vekare Nature! Bvisa zvivakwa izvi uye zvese zvishandiso zvine hungwaru zvinogona kunge zviri marara emagetsi! ”
Zvakanaka, ndaizopokana nechirevo icho zvose Ham Comms anongedzera-kune-poindi, asi ini ndiri kuona zviri kutaurwa nemunyori.
Asi kana ini ndichifunga nezvazvo, mumakore makumi maviri nemashanu kana makore andakange ndiine nhare mbozha, handikwanise kuyeuka imwe nguva iyo yanga isina kubatana netiweki.
Mamirioni anoshandiswa kuvandudza Indaneti uye kunyanya nharembozha yekuwana mairi, zvese maererano nekumhanyisa uye kufukidza. Hongu inogona kudzimwa, hongu iri panjodzi yekufunga kwakaipa, asi kune 99.9999 inodzokorodza muzana yenguva, inoshanda!
Ndingatarise kuti pane mukana wakakosha wekuti zvishandiso izvi zvive "zvigadzirwa zvemagetsi", kunze kwekunge mamiriro apocalyptic…
...izvo zvinondiunza kune wechitatu munyori.
Akafanotaura kuti, muchiitiko cheAmagedhoni, "Nharembozha, nharembozha, michina yemari, vakuru vemunharaunda, zvekudya, zviteshi zvemagetsi, zvinopihwa mvura, gasi nemagetsi uye vanogadzira mafuta, vemauto, mapurisa, moto uye amburenzi." zvese zvaizovhara pasi.
Anopedzisa achidaro "Amateur Radio neRAYNET zvinogona kuzova nzira dzedzimwe nzira dzasara dzekutaurirana dzasara munyika."
Zvekare iwe haugone kupokana pamusoro uye ini ndinowana iyo poindi.
Asi chaizvo, kana zvese izvi zvishandiso nemasangano zvadzikira mune apocalyptic chiitiko uye ari murume wega wega, handifunge kuti yangu yekutanga kufunga ichave yekushandisa nguva kumisikidza 40m dipole uye kushandisa yangu EMP-yakachengetedzwa (wanga wafunga nezvazvo, handiti?) FT-817 kuti ndione kana ndichigona kusangana nevamwe varombo vari kuziya nenzara verudzi rwevanhu, vari kuedzawo kurarama mumashure…
Ndinovimba vanyori vetsamba vachandiregerera, sezvo ini ndichi "svika" kwavari kubva, asi ndinonyatsonzwa kuti vari kupotsa pfungwa yakakosha.
Iyo Internet ndiyo yepakati
Iyo poindi ndeyekuti, mune 21st Century, isu tine nzira nyowani yekuparadzira iyo inokwana munhu wese anogona, uye anoita, atove kuwana (pasina bvunzo uye yakakosha rezinesi) - iyo Internet.
Uye zvingave zvisina kunaka kwatiri kuti tirege izvo kana zvakatonyanya, kuzvitutumadza, nekuda kwekuti chitsva, chakagadzirwa nevanhu uye kwete iyo ionosphere yatinoda tese kwazvo!
Ionosphere inoyevedza zviwanikwa zviwanikwa, asi iine S9 yeruzha munzvimbo zhinji dzemadhorobha mazuva ano, zvinosuwisa kuti zviri kuramba zvichinetsa kuita zvine hungwaru kutaurirana nenzira yataimboita. Uchida kana kwete, iyo Internet ndiyo yezana ramakumi maviri nemasere yekuparadzira svikiro yesarudzo.
Chii ichi chekuita neNetwork maRadio?
Pano tine zvishandiso izvo, neimwe nzira, zvisiri maredhiyo nenzira yakajairika, asi izvo zvichiri kushandisa RF kutaura. Radiyo dzisingashandisi ionosphere, asi shandisa nzira nyowani dzekuparadzira, iyo Internet.
Ini ndinofunga ruzhinji rwevanhu mazuva ano vanogona kuenderana nemidziyo iyi - ivo vanoziva zvakakwana kuti vanzwisisike, asi vakasiyana zvakakwana kuvasuma kune zvinofadza zve2-nzira kutaurirana.
Mune mamwe mazwi, inzira ingangoitika inoshanda kune yedu fomu yeredhiyo kutaurirana kazhinji, uye Ham Radio kunyanya.
Ehe, vamwe vanogona kusapfuurira munzira yese kuenda kuHam License, asi vamwe simba uye icho chinofanira kuve chinhu chakanaka - tinofanirwa kutanga kune vanhu uye nehunyanzvi hwavanoshandisa mazuva ese.
Zvirokwazvo isu hatigone kuvapa izvo zvinoita, pamusoro, se "yakaderera" nzira yekutaurirana, pamwe ne bvunzo, senzira chete yekupinda kune izvo, pakupedzisira, hobho?
Ini ndinotya mamiriro azvino ezvinhu muHam Radio angangotungamira mukutsakatika kwedu sechivaraidzo (pamberi pekupera-kwe-kwe-nyika chiitiko chakatemerwa nemunyori wetsamba yechitatu kuna RadCom.)
Mudiwa, Ndakagwinyisa Nyika!
Makore apfuura, kutaurirana daro refu kwaigoneka chete nemutengo unodhura-wakaiswa mafoni kana neRadio. Kwete kudaro izvozvi - nharembozha internet yakanganisa nyika uye Ham Radio inoda kuzvitsanangudza pachayo kuti irambe ichishanda mu21st Century. Ini handifunge kuti tichazadzisa izvozvo nekuratidza kuti hapana "mashiripiti" mumafoni nhare!
Muchokwadi, hatigone kutora chero chinhu zvakare - vanhu havana chero "mamiriro" anovabvumira kuti vanzwisise kuti chii chaicho Ham Radio, saka isu tinofanirwa kutsvaga dzimwe nzira dzekuenderana navo. Kutanga nemidziyo yavanotova yavo uye yavanayo muhomwe pamwe navo zvirokwazvo ndiyo imwe nzira yakakodzera yekuita izvozvo. Network maRadio ndiwo chaiwo mhando yechigadzirwa chinogona kuvaka pane icho kufarira.
Uchishandisa Android OS, uchishandisa touch screen, inokwanisa kushandisa maapplication avanoshandisa kare, inokwanisa kuve foni, chishandiso cheinternet, asi setup yekutaurirana kweamateur, vangangove mudziyo wakasanganiswa wakakwana, kana kutanga kwekutanga budiriro yakananga kuchinhu chakadai.
Ini ndaikurudzira maHams ese kuti vachengete yakavhurika pfungwa nezvenyaya iyi uye kwete kudzinga Network Radio chiitiko kubva paruoko.
Ikoko kwese kuchatungamira, ndiani anoziva? Asi zvinogona kuva kune rakajeka ramangwana kupfuura vazhinji vanotya…
NB Chris ari kupa hurukuro kuNetwork Radios kuWythall Hamfest padhuze neBirmingham UK nemusi weSvondo 25 Kurume 2018 na11.00: XNUMXam. Vese vanogamuchirwa.
Chii chinonzi PTT4U?
Ko kana iwe uchigona kuve ne samambure enhandare uye nharembozha dzine kufukidzwa kwepasirese? Kanganwa nezve anodhura anodzokorora uye marezinesi. Zvese zvinoshanda kuburikidza neroja re 3G / 4G network.
Pamwe iwe unoda 1-to-1 kana 1-to-yakawanda redhiyo kutaurirana, izvi ndezvawe
Hapana renji marejista. Kana iwe uine mbozhanhare yekuvhara, iwe wakabatana! Izvi zvinoreva kuti redhiyo yega yega inogona kunge iri munyika dzakasiyana, uye iwe uchiri kutaura nevashandi vako.
Ndeipi nharaunda inovhara maredhiyo ePTT4U?
Iko hakuna muganho. Kusvika paunenge uine GSM / 3G / 4G kana WiFi (Android mamodheru) chiratidzo iwe unosvika. Izvi zvinoreva kuti iwe unongovimba chete neserifoni inotakura sevhisi, kana iyo WiFi hotspot.
Nei izvi zviri nani zvichienzaniswa neyechinyakare walkie talkies?
Tsika mbiri nzira redhiyo ichagara ichiganhurirwa nedaro uye kupindira. Sezvo isu tichishanda nekubatana kwedhijitari kunovimba nema cellphones anotakura, iwe uchagara uchinzwa zvine ruzha uye zvakajeka kupindira-kwemahara kutaurirana. Kunze kwezvo, iwe haufanire kuisa mari mune inodhura redhiyo infra-zvivakwa, seanodzokorora, shongwe, antenna kana nzvimbo dzekurenda.
Ndiani anogona kubatsirwa PTT4U?
Taxi & general makambani ekufambisa, kuchengetedzwa kwemutemo, varindiri vega, nzvimbo dzekuvaka, logistics, mabhokisi ekufambisa, indasitiri yezvekurima, uye chero munhu angadii nzira mbiri-dzehunyanzvi nhepfenyuro yekutaurirana pasina zvirambidzo zvemhando.
Ini ndoda kufukidza nzvimbo yakakura uye munzvimbo dzakawanda. Ini ndinoda seti yekudzokorora uye maantena?
Kwete. Sevhisi yedu inoshandisa network yevatakuri veGSM / 3G / 4G. Iwe haufanire kuisa mari kune chero network infra-chimiro, kunze kweiyo nhare kana ruoko rwakabata mawairesi
Inoshanda kune chero nyika?
Kusvika iwe uine mukana weinternet (kuburikidza 3G / 4G kana WiFi) ipapo unogona kushandisa system yedu, zvisinei nenzvimbo.
Vanogona here kutaura pakati pavo, kana vari munyika dzakasiyana?
Ehe. Chero mushandisi anogona kutaura kune chero mumwe mushandisi, zvisinei nenzvimbo.
Ndinogona here kushandisa yangu PTT4U redhiyo sefoni yakajairwa?
Yedu yese android based maredhiyo anogona kuita uye kugamuchira mafoni uye maSMS / zvinyorwa. Iwo asiri-Android based modhi haigone kushandiswa semafoni.
Ndinogona kushandisa chero SIM kadhi?
Ehe, unogona kushandisa chero GSM SIM Kadhi. Mawairesi edu ese SIM yakavhurwa uye inoenderana nechero GSM / 3G / 4G / LTE Network.
Iwe unopa iyo PTT4U mawairesi ine SIM kadhi?
Kwete. Iwe unofanirwa kuisa yako SIM kadhi.
Chii chinouya neredhiyo yega yega?
Yese redhiyo pasuru inosanganisira redhiyo, charger, bhatiri, kanyanga, bhandi clip uye usb tambo. Iyo nharembozha ichiri kuunza bracket inokwira, maikorofoni uye yekunze GPS antenna.
Ko PTT4U Android maredhiyo anoda SIM kadhi yeWiFi kushandiswa kwakasimba?
Kwete. Kana iwe uchingoda kushandisa chiratidzo cheWiFi, saka SIM kadhi haidiwe.
Ndinogona here kushandisa yangu yeApple smartphone neiri sevhisi?
Ehe. Iwe unongoda kuisa yedu PTT4U kunyorera pane yako smartphone.
Ndinogona here kushandisa PTT4U maredhiyo ane maCDMA anotakura, saVerizon muUS?
Kwete. Mawairesi edu ese anoda GSM-based carrier. Yedu 4G / LTE maredhiyo haakwanise kushandiswa neVerizon, nekuti inoda pre-kubvumidzwa kwechigadzirwa chimwe nechimwe pane yavo network.
Ndinogona here kushandisa PTT4U maredhiyo neAT&T kana T-Mobile, muUS?
MuUS, mawairesi edu achashanda zvakanaka neAT&T uye T-Mobile. MuEurope, Australia ne Africa zvichashandawo pasina nyaya.
Ndinogona here kushandisa PTT4U maredhiyo pandinenge ndiri-grid, pagungwa semuenzaniso?
Iwe unoda kubatana kweinternet kuti ushandise mawairesi edu. Iwe unogona kushandisa satellite hotspot senge uyu munhu izvo zvinokupa iwe kufukidzwa kwepasirese, kunyangwe iri kure-kumahombekombe.
Chii chinoitika kana ndisina internet?
Kana iwe usingakwanise kuwana 3G kana WiFi saka zvinosuruvarisa kuti haizokwanise kubatanidza kunetiweki yedu. Nekudaro, iwe uchiri kukwanisa kuishandisa seyakajairwa foni kana iwe ukawana yakakwana GSM 2G chiratidzo.
Chii chiri basa reSOS bhatani pane mawairesi?
Bhatani reSOS rinotumira alarm kune vese vashandisi, ichiratidza nzvimbo yemushandisi akatsimbirira bhatani reSOS.
Yakawanda sei data inoda PTT4U maredhiyo anoda mumwedzi?
Zvekushandisa zvenguva dzose, 500 MB dhata yedhata ichave yakakwana. Mumamiriro akaipisisa, uko kutaurirana kunoitika kwenguva yakareba, 1 GB dhata yedhata inogona kudikanwa
Iwe unopa anotumira system?
Ehe, iwe unogona kuisa yedu kutumira system pane chero Windows PC uye bata chero vashandisi, tarisa pavamire pamepu, kumhanya, tumira wega mameseji, ita zvakavanzika nemapoka kufona.
Ndinogona kutarisa nzvimbo yeGPS yevashandisi?
Ehe, iwe unogona kutarisa realtime nzvimbo yevashandisi vese uye tarisa kwavo kuteedzera zvakare.
Iwe unogona kutsanangura kodzero dzekutaura, uye maprofiles mvumo kune wega mushandisi?
Ehe, zvese izvo ruzivo zvinogona kusetwa.
Inogona here PTT4U redhiyo kuita yakavanzika uye mapoka kufonera kune vamwe vashandisi?
Ehe, iwe unogona kuita ese ari maviri mafoni ekufona.
Inogona here PTT4U redhiyo kutumira zvakavanzika mameseji kune vamwe vashandisi?
Ehe, iwe unogona kutumira zvakavanzika mameseji kune chero mushandisi.
Ini ndinofanira kunyorera kune chero sevhisi kuti ndishandise PTT4U?
Kunze kwekuve nehurongwa hwe data neako anotakura nharembozha, unofanirwa kunyorera yedu PTT4U gore rega kunyorera.
Ndinobhadhara zvakadii kunyorera PTT4U?
Yedu yegore kunyorera mutengo paredhiyo inogona kuongororwa pano.
Wadii kungoshandisa foni kutaura nemumwe?
Yedu-ye-iyo-iyo network network ingangoita nekukasira, isingasviki 1 sekondi kusvika pakudzvanya iyo PTT pane imwe redhiyo kuzwi rako ichibuda imwe yacho kana iyo, uyezve iwe unogona kutaura kusvika ku10000 panguva imwe chete, yakanakira kutaurirana kune vashandi vekumunda kana vashandi vepatrol.
Chii chinoitika kana sevha isipo?
Izvozvo hazvigoneki. Tine 21 back-up server, yakarongedzwa, inochengetwa nenyika-ye-iyo-IDC (Internet Data Centers) kuNorth & Central America, Brazil, England, Germany, Hong Kong, Australia, Singapore, nedzimwe nzvimbo. Mukana wekudzikiswa kwebasa, iwe unogona kutarisira kwedu hunyanzvi hwakakwana IT Team hunyanzvi pamwe nemakore gumi echiitiko muPTT pamusoro peCellular Cellular (POC) indasitiri.
Ndingabhadhara sei mawairesi?
Unogona kubhadhara nePaypal kana chero kiredhiti kadhi.
Ndingaite sei kubhadhara kunyorera?
Ini ndinogona kubhadhara mawairesi uye kunyoreswa pamwechete?
Ehe, uchishandisa Paypal. Isu tinokupa iwe inodzokororwa bhiri, iko kwekutanga kuchaja mutengo wewairesi pamwe neyekutanga gore rekubhadhara muripo. Iwe uchaona izvi zvakadzama se "mari yekunyoresa" pane yega chigadzirwa tsananguro (redhiyo inosanganisirwa)
Iwe unopa dzimwe nzira dzekubhadhara here?
Kwete panguva ino.
Ndinogona kuva mutengesi wako?
Ehe, isu tiri kutsvaga vatengesi pasi rese. Ndapota taura nesu. Unogona kutarisa kwedu runyorwa rwevatengesi pano.
Ndiri kuda maredhiyo akawanda. Ndinogona kuedza ndisati ndatenga?
Kwete panguva ino. Asi iwe unogona kutenga imwe yedu Kutanga Mapakeji pamutengo wakaderedzwa, usati waisa mari muhuwandu hwakawanda hwemaredhiyo / kunyoreswa.
Ini ndinogona kuwana yemahara muedzo?
Isu hatipe chirongwa chakadai panguva ino. Isu tine chivimbo kwazvo kuti iwe uchada yedu system zvakadaro.
Ndiri kuda gumi ndonyoresa kana zvimwe. Ndingawana dhisikaundi here?
Ehe, ona edu mapfupiso pano.
Ndikaraira nhasi, ndinobhadhariswa nhasi? Uye iko kunyorera kunotanga riini?
Iwe unozobhadhariswa panguva iyo iwe yaunopedza yako odha. Iyo yegore gore kunyorera ichatanga kuverenga chete kana iwe ukagamuchira mawairesi uye tibvunzei kumisikidza kunyorera. Saizvozvi, kana ukatadza kubhadharwa kunoteedzazve, uchine imwe nguva yekushandisazve kunyoreswa, pasina kusunungura sevhisi yePTT.
Ndinogona here kunyorera pamwedzi?
Kwete panguva ino, isu tinongopa chete kunyorera kwegore.
Iwe unopa API kuwana kuitira kuti ndikwanise kushandisa yangu software kutarisa nzvimbo dzemushandisi?
Ehe, iwe unogona kuwana mukana weAPI kushandisa yako wega geolocation mhinduro.
Iwe unopa yakazara-duplex kutaurirana?
Yese edu eredhiyo e-android anotendera enguva dzose mafoni, mune yakazara duplex. Paunenge uchishandisa redhiyo-senge kutaurirana nePTT4U, zvese zvekutaurirana zvichave zvakapusa.
Mawairesi ako ane SIM mbiri here?
Mazhinji emaredhiyo edu anopa maviri SIM slot. Tarisa zvirevo zveradio imwe neimwe.
Iwe unonyora here kutaurirana?
Ehe, zvese kutaurirana zvakavharirwa neprotocol protocol uye chete network network yesangano rako inokwanisa kuwana nhoroondo yezvakaitika.
Ndine sangano rakakura. Ini ndinogona kubata pachikuva pachangu?
Ehe, iwe unogona kubata vese vashandisi, mapoka, kutaura kodzero, nezvimwe, zvinoenderana nezvako zvaunoda.
Izvi ndizvo kwandiri here?
Chero eanotevera maindasitiri anogona kushandisa mhinduro yedu:
Courier, Taxi, Limo Service, Tow rori, Njanji, Airport, Chiteshi chengarava, Chiedza njanji, MRT, Logistics
Kuvaka Saiti, Kuendesa simende, Magetsi, Kuchera, Plumbing, Roofing
Patrol Guard Service, Hotera, Condo, Mahofisi, Fekitori, Zviitiko zvemitambo, Dzidzo, Fire Service
Restaurant, Hotera, Resort, Shopping mall, Supermarket
Mapurisa, Madhipatimendi aSheriff, Veruzhinji Mabasa, Madhipatimendi Emvura
Vashandi vari voga
Vazhinji vatengi vega vanoshandisa sevhisi yedu kuti vagare vachikurukura nemhuri uye neshamwari
Izvi zvinonakidza zvechokwadi! Izvi ndezvechokwadi here?
Ehe iri. Uye isu tinofanirwa kubvumirana: izvi zvinoshamisa! Tora yako kutanga-up package nhasi nechishoma!
"Haisi chaiyo Ham Radio!" naChris G7DDN
mumufananidzo - Inrico TM-8
Ini ndanga ndichifungisisa nguva pfupi yadarika pane inoshamisa nhoroondo yeAmateur Radio, kubva kumapiyona ekutanga aine spark transmitters uye mujaho wekutora masaini ekutanga kuyambuka Atlantic, kusvika kune vanofarira Microwave vakagadzira nzira yekumberi yenzvimbo yekutaurirana uye satellite satellite (uye, zevezera izvi, tekinoroji yefoni!)
Nhoroondo yeHam Radio neRF tekinoroji yakabatana zvisingaenzanisike - pakanga paine kunyange nguva muno muUK uko kwaitendwa, zvisina tsarukano, kuti Ham Radio callign yaizokubatsira iwe kuti uwane basa neiyo BBC!
Zvisinei shanduko yakauya nekukasira, kutaura, munhoroondo yekutanga yeredhiyo. Kubva pakuedza kwaMarconi kuenda kune yekutanga Ruzhinji Broadcast Zviteshi kwaingove makore makumi maviri nemashanu kana zvakadaro. TV yaingova mamwe makore gumi nemashanu kana zvakadaro kumashure kweizvozvo, zvichingodaro…
Kuramba (kana kusanzwa pa "Ohm")
Asi iyo nhoroondo yeHam Radio zvakare ndeimwe ye kushorwa kuchinja - kwete kubva kumapiyona, ivo vaiwanzova vanokuchidzira, asi kubva ku "mazuva ese" Hams.
Rega ndione kana ndichigona kukupa mimwe mienzaniso, nerurimi rwangu rwakasimwa zvakasimba kwazvo padama rangu…
“Haisi Real Ham Radio!”
Iwo maHams ekutanga aishandisa CW zvakanyanya zvakanyanya. Saka AM paakasvika as one of the first of the modes modes, pakave nemhirizhonga…“Haisi chaiyo Ham Radio! Real Ham Radio inosanganisira kushandisa Morse Key! Chii chiri munyika ndiko hobby kuri kuuya, kushandisa izwi kutaurirana pamusoro pemasaisai? Kukwirisa! ”
Asi hupenyu hwakaenderera, AM yakagamuchirwa uye zvese zvaive zvakanaka muHamland zvakare.
Ipapo transistor tekinoroji yakasvika mukupera kwema1940 uye kutanga kwema1950, zvichidenha mhinduro. "Batirira! Icho hachisi chaicho Ham Radio. Real Ham Radiyo inopenya murima - hatigone kuve neiyi tekinoroji diki - haife yakagara kwenguva yakareba sevhavha kana kuvimbika ”
Asi hupenyu hwakaenderera, zvigadzirwa zvemamiriro akasimba zvakagamuchirwa uye zvese zvaive zvakanaka muHamland zvakare.
Ipapo SSB yakasvika uye pakanga paine zvimwe kusagutsikana… “Haasi iyo chaiyo Radio yaHam. Real Ham Radiyo haiteedzere kunge Donald Duck! Ichinyakare, ichakurumidza kudonha kana vanhu vaguta nekunzwa iwo mazwi akapusa ”
Asi hupenyu hwakaenderera, SSB yakawana kugamuchirwa uye zvese zvaive zvakanaka muHamland zvakare.
Ipapo FM nevanodzokorora vakasvika uye paive nekuparadzaniswa mukati meiyo hobby (uye yanga isiri yakatwasuka kana kutwasuka chero!) “Haasi iyo chaiyo Radio yaHam. Real Ham Radio haidi kushandisa chinhu icho pamusoro pegomo kubatsira chiratidzo chako kuenda kune imwe nzvimbo! Real Ham Radio yakanangana nekunongedza! ”
Asi hupenyu hwakaenderera, FM & vanodzokorora vakawana kugamuchirwa uye zvese zvaive zvakanaka muHamland zvakare.
Ipapo Packet Radio yakasvika uye pakanga paine zvechokwadi dambudziko… “Haasi iyo chaiyo Radio yaHam. Real Ham Radio haidi imwe yeaya matsva-akakomberedzwa makomputa zvinhu kuti zvishande. Tora kiyi yako kana maikorofoni utange kushanda mamwe maHams nemazvo! ”
Asi hupenyu hwakaenderera, Packet Radio yakawana kugamuchirwa uye zvese zvaive zvakanaka muHamland zvakare.
Ipapo maDigimode akasvika uye pakanga paine kukakavara zvakanyanya… “Haasi iyo chaiyo Radio yaHam. Real Ham Radio haibatanidzi kunyora mameseji kune mamwe Hams - neavo vanoparara makomputa zvakare! Chii paPanyika chavari kuita muhovha iyi? ”
Asi hupenyu hwakaenderera, maDigimode akawana kugamuchirwa uye zvese zvaive zvakanaka muHamland zvakare.
Pakazosvika maDigital Voice modes akasvika paine mamwe chaizvo kusawirirana kwakakomba… “Haasi iyo chaiyo Radio yaHam. Real Ham Radiyo hainzwe senge R2D2! Mawairesi chaiwo haashandise iyo Internet kuvabatsira kutenderera pasirese, ivo VANOFANIRA kushandisa yekuparadzira kwemhepo. Chii chiri kuitika kuhovha iyi ??? ”
Asi hupenyu hwakaenderera, D-STAR uye mamwe maDigital Voice modes akawana kugamuchirwa uye zvese zvaive zvakanaka muHamland zvakare.
Ipapo isu tinosvika nhasi uye Network maRadio anouya panzvimbo uye gehena rese rinosununguka! "Icho hachisi chaicho Ham Radio. Ichi chi kutamba paHam Radio - hapana Amateur RF saka haisi Ham Radio chete. Uyezve, ndakashanda nesimba rezinesi rangu, vamwe vese vanofanirwawo! Vanhu vangashinga sei kunakidzwa nekutaurirana nenzira isiri iyo! ”
Saka hupenyu huchaenderera mberi uye zvese zvichave zvakanaka muHamland zvakare?
Iyo 21st Century Dambudziko
Ichi ndicho chikonzero kuuya kweNetwork Radios kunomiririra dambudziko rakadai kwatiri seHams - zviri kuita kuti tifungisise zvizere zvazvinoreva kuva Radio Amateur muna 2018 nekupfuura.
Uye isu tichafanirwa kutanga takatarisana nemibvunzo yakafanana neiyi…
Chii chaizvo chinotsanangudza Radio Amateur?
Tinorevei ne "Amateur RF"?
Iyo RF inogadzirwa nemumwe munhu ari Amateur?
Kana iri RF inogadzirwa pane rimwe bhendi ratakapihwa nehurumende?
Kana zvirizvo, zvinofanirwa kunge zviri izvo kuva izvo here?
Hazvingave chimwe chinhu here?
Pane chimwe cheizvi chinonyanya kukosha here?
Zvakadiniko nezvikwata zvedu?
SaHams isu takanyanya "kunamatira" kuzvikwata zvedu. Kunyangwe iri 160m kana 2m, isu tinenge tine pfungwa yepfungwa ye "muridzi" wavo.
Tine mabhendi "anodiwa", isu tine mabhendi isu haana kakawanda.
Isu tinotova ne "yedu" nzvimbo mafambiro uye mamwe maHams anowana akati "kusimbisa" kana mumwe mukomana amateur asiri mu "group" ravo Nhunzi kushandisa "yavo" frequency!
Uye zvakadaro mune 21st Century, ndinotenda kuti iyo pfungwa yese yemabhendi & mafambiro ari kuramba achiwedzera kuyerera. Nei izvi zvingave?
Muenzaniso kubva Broadcast Radio
Kwete kare kare, taigona kupinda muzvitepfenyuro paLong Wave (LF), Medium Wave (MF), Pfupi Wave (HF) uye FM (VHF Band II). Zviteshi zvinowanzozvinongedzera pachavo nekuwanda: "247 metres Radio 1" kana "1152 AM" semuenzaniso. Yakaonekwa chikamu chekuzivikanwa kwechiteshi - vazhinji vaive neyakawandisa mumazita avo ezviteshi!
Asi nhasi, isu tinowedzera kunzwa zvishoma nezve izvi. Paunoteerera nhepfenyuro mazuva ano, vanoita kunge vari kuongorora vachipa mafambiro, panzvimbo pezvo vanongozivisa kuti vari pa "FM, DAB uye Dhijitari" kana chimwe chinhu chakafanana neicho.
Sei? Nekuti redhiyo ndechimwe chinhu chaungangowedzera kushandisa mune imwe yenzira mbiri - kungave digitally (kuburikidza neDAB kana Satellite kana nzira dzakafanana) kana kubudikidza neInternet. Frequency uye nekuwedzera, mabhendi, haana kukodzera sezvaaimboita.
Nhepfenyuro hombe dziri kuwedzera zvakare kubva pa "chinyakare" redhiyo.
Pa Pfupi Wave - inongova nyika shoma & mapoka akasiyana ezvitendero anoita seanoshanda ipapo izvozvi. Ivo vakomana vakuru vari kufamba vachibuda murefu uye Medium Wave futi. Kana nhepfenyuro dzekutengesa dzichienda kure, tinofanirwa kubvunza kuti nei.
Zvikwata zvine basa here?
Ndine fungidziro yekuti ichi, muchidimbu zvirinani, nekuti mabhendi uye masaisai hazvina basa zvakanyanya mazuva ano. Dzimba redhiyo zvishandiso zvine zvakawanda nezve push mabhatani uye masikirini anokusvitsa iwe kuchiteshi chako ipapo, pane kugadzirisa tunhi nemasaiti. Ndicho chigadzirwa chekupedzisira chakakosha, kwete hazvo nzira yazvinosvika kwauri.
Ndiani anotepfenyura redhiyo yemazuva ano mumazuva ano ine manyorerwo ekugadzirisa dial? Chero ani? Yakanga iri huru yekubatidza pane mawairesi ese kwete izvo makore mazhinji apfuura! Ini ndinogona kutorangarira ndichigadzirisa yekare VHF TV mukati nekufona mumazuva angu ekutanga papasi rino - izvo kwazvo zvinoita sezvisinganzwisisike izvozvi!
Kuenda nhanho kumberi, nhepfenyuro zhinji hadzisi kunyange kushandisa yakananga RF kune ese mazuva ano! Tichiri kutaura nezvavo se "maredhiyo" (kana dzimwe nguva "maredhiyo eInternet")
Pane here chikonzero chekufunga Ham Radio seyakavarairwa isingazongogara ichifamba munzira yakafanana nedhairekitori? Imwe yesimba redu munhoroondo saHams yave iri yekuti isu takanakira kumbundira matekinoroji matsva nekuashandura kuti tishandise isu pachedu.
Pfungwa yandiri kutungamira kusvika apa ndeiyi - ndinofungidzira kuti "mabhendi" uye "mafambiro" haanyanyoita nyaya hombe muzera redhijitari sezvatingaite se ivo kuva.
Mukukosha, mabhendi anongovapo nekuda kwekupararira.
160, 40m, 20m, 10m, 2m nezvimwewo zvese, muchokwadi, "mutsara-wekuona" mabhendi. Kuwedzeredza-kurerutsa chidzidzo, iwo ionospheric kana tropospheric materu ayo anosimudzira iyi mutsara-wekuona-kuona uye kuishandura kuita chimwe chinhu.
Bhendi rega rega rine hunhu hwakasiyana hwekuparadzira semhedzisiro, ichipa yega yega bhendi "hunhu" uye kune vamwe, kudzidza kwekuparadzira mukati mawo chikamu chinonakidza chekuvaraidza.
Kuparadzirwa kwakaitwa nevanhu kwakangosiyana
Patinofunga nezve (uye kushandisa) iyo Internet seyakagadzirwa nevanhu-inogadzira svikiro (zvinova zvirizvo - inofambisa masaini kutenderera pasirese) ipapo pfungwa yemabhendi inozowedzera.
Iyo Internet yakafanana, ingangoita yakafara pasirese, yepasi rose "bhendi", inogara yakavhura S9 + 40 kune nyika dzese 24/7 ine mashoma vagaries - uye kwete yezwi chete, asi yekuona uye mamwe madhijitari modhi futi.
Isa saizvozvo, ndiani asingade kuishandisa? Zvingave zvine basa here kuti iwe yaive "bhendi" iwe (kana wanga usiri), kana paine imwe?
Saka pfungwa ye "mabhendi", ayo mazhinji edu atinotsanangudza zviitiko zvedu, inogona kunge ichipunzika pamberi pedu mune ino dhijitari zera uye isu tingatotadza kuzviziva izvozvi! Izvi hazvireve kuti mabhendi edu haasati aripo, nenzira - zvakajeka ivo. Izvo chete izvo, kune vanhu vazhinji mazuva ano, mabhendi ipfungwa yekune imwe nyika.
Sezvo hobho painotanga kuuya maererano nezvimwe zvinoreva izvi, dzimwe nyaya dzinobva dzatanga kusimuka, senge…
Tinoda bvunzo zvakare kuti tiwane rezinesi?
Inofanira kutora fomu ipi kana mafomu, kana zvirizvo?
Tinogona here kuona kuwanda kwevanhu vatsva vachiuya mune yekuzvivaraidza nekuti kupinda kwaro kuri nyore?
Isu tinodaro here chido vanhu vatsva vari kuuya, kunyanya kana maonero avo akasiyana needu?
Chii chichaita kuti hobho itaridzike semakore makumi maviri emakore?
Chii chinoitika kumabhendi edu "echinyakare"?
Ini ndinotarisira kuona hurukuro zhinji mune ramangwana nezve izvi - zvinonyanya kunakidza!
Kunze Kwenzvimbo Yenyaradzo…
Zvisinei zvichaita kuti vazhinji vedu tinzwe kusagadzikana zvakanyanya - pasi riri kufamba pasi petsoka dzedu uye tsika yechinyakare yeHam Radio yakamirira kupikiswa kuti ishandure uye igadzirise…
Ini handioni ichi sechinhu chakaipa - njere dzakatendeseka nharo ndeyekutambirwa. Chinhu chakakosha ndechekuchengeta pfungwa dzedu nekufunga kwedu kwakashama. Hatifanire kuramba chimwe chinhu nekuda kwekuti chitsva kana nekuti chinopesana nemafungiro edu akare enzvimbo yeredhiyo iri kuenda kwakawanda.
Saizvozvo, isu hatifanire kukanda mwana nemvura yekugezesa uye kuramba zvechivanhu Ham Radio sezvazvange zviri zvemakore. Ionosphere neInternet zvinowirirana, kwete mumakwikwi.
Ini zvangu maonero?
Kana iwe waverenga kusvika pano uye uchinyatsoda pfungwa dzangu dzega…
Sei isu tisingakwanise kuve neakanakisa epasirese nyika? Zvirokwazvo tinogona.
Network maredhiyo (panguva ino mukusimudzira kwavo zvirinani) haasi makwikwi maredhiyo semuenzaniso, uye iyo Internet haisati iri nzira yekukwikwidza-inoshamwaridzika yekuparadzira. (Izvi zvinogona kuchinja zvakadaro!) Saka kukwikwidza kuchiri kwakanakisa pane echinyakare Ham mabhendi. Ndichakuona pamamita makumi masere - 80 59 OM…
Nekudaro, enguva dzose akavimbika emhando yepamusoro macontinu kupoterera pasirese asi chinhu chimwe Network Network maRadio anopfuura, saka wadii kungoshandisa izvo kana iwe uchida (kana kana iyo HF mabhendi azere neruzha kana zvimwe kufa)? Ndino! Ini handioni kuwedzerwa kwesarudzo mune yekuvaraidza sechinhu chakaipa.
Kunakidzwa ndiko kiyi
Icho chokwadi chekuti ini ndiri kutumira pane maseru frequency pa800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz kana paWi-Fi pane 2.4GHz kana 5GHz zvine basa? Pane chimwe chinhu chakaipa mukati meizvozvo? Pane humwe hunyanzvi mukushandisa 21 MHz kana 432MHz, semuenzaniso? Ivo vanongova "mafambiro" mushure mezvose.
Ndinosarudza kuzviona ndichitevera chirevo chekirabhu yangu yemuno redhiyo, "Kutandara neRF". Kunyangwe ini ndikasarudza kushandisa Network Radio kana Yaecomwood super-duper base chiteshi haina kukodzera kwandiri. Kunakidzwa kweiyo hobby zvese, zvikasadaro nei uine hobby?
Chero nzira iyo gakava iri rinoenda uye chero nzira inotora iyi hobby huru, mutsetse wangu unenge uri wekuchengetedza zvose hupfumi hwe ose chimiro chekunakidzwa.
Mune mamwe mazwi, kudzokera kumusoro weichi chidimbu uye shandura asi izwi rimwe chete, “Ndizvozvo ALL 'chaiye' Ham Radio ”
Inodzivirirwa: Talkpod N58 firmware inogadziridza 20180301
kugutsikana Iri pasiwedhi kudzivirirwa. Kuhuona ndapota kupinda password pazasi: